January 2021 – Mohinga Matters
January 27, 2021 May 26, 2021 ~ mohingaamatters	~ Leaveacomment
အဲ့ဒီနေ့က နာဂါဆာကီမြို့က ‘ဦရကမိ’ ဘုရားကျောင်း (Urakami Cathedral) မှာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပေးပြီးတော့ ကျွန်မတို့ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အိမ်ပြန်လမ်းတလျှောက်မှာ တောင်ကုန်းတွေကြားထဲ တဖြေးဖြေး ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်တော့မယ့် လိမ္မော်ဖျော့ရောင်နေဝန်းကိုသာ ဓာတ်ရထားပြတင်းပေါက်တွေဆီကနေ ငေးပြီး နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြတယ်။ နာဂါဆာကီမြို့ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလွန်ရှည်လျားလှပတဲ့ ကျူးရှူးကျွန်းရဲ့ ပင်လယ်အော်ထိပ်မှာ တည်ရှိပြီး သမိုင်းအရလည်း အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ၁၇ ရာစုနှစ်ကစပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် တံခါးပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အချိန် နာဂါဆာကီမြို့မှာသာ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီး ပထမဦးဆုံး ဥရောပတိုက်သားတွေ ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇ ရာစုနှစ်လောက်မှာ ပေါ်တူဂီနဲ့ ဒတ်ချ်တို့ရဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နာဂါဆာကီမြို့ရဲ့ မြို့သူမြို့သားတချို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ နယ်ခြားမြေခြားကလာတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကျိူတိုကနေ အုပ်ချုပ်သူစစ်မင်း ဟီဒယ်ယိုရှိ တိုယိုတိုမီ (Hideyoshi … Continue reading ကျဘမ်းခေတ်စာ – နာဂါဆာကီမှ အတွေးစများ
January 19, 2021 April 15, 2021 ~ mohingaamatters	~ Leaveacomment
A comedian joked; “Epic fire broke out, fire fighters arrived in time……. to witness the ashes”. People laughed. Because it was totally relatable. Or they thought it was. Similar scene as above had happened quite frequently during the previous decades when Myanmar was still under the military junta. At that time, everything in general was … Continue reading Mohinga Talks: The Rise of Myanmar Fire Service Department
America, Don’t Put Ideas in Our Head!
January 8, 2021 May 26, 2021 ~ mohingaamatters	~ Leaveacomment
Shock. Disbelief. Worry. That’s what I felt when I saw the news reports about riots and break-in took place at the United States Capitol. How on earth such uncivil act happened in the US – the great power with its democracy that we look up to. It seems like the great power is not so … Continue reading America, Don’t Put Ideas in Our Head!